Ngathi-iNanjing Huade yoGcino lwezixhobo zeMveliso Co., Ltd.
I-Nanjing Huade Storage Equipment Manufacturing Co., Ltd. yasekwa ngo-1993. Singomnye wabanikezeli abakhokelayo nabokuqala abajolise kuyilo, ubuqhetseba, ukufakelwa kweenkqubo zokugcina ezizenzekelayo kunye nenkqubo yokugcina izinto.
Ngo-2009, i-HUADE yakha umzi-mveliso wayo omtsha ongaphezulu kweemitha zesikwere ezingama-66,000 eNanjing Jiangning Science Park. Kukho izityalo ezi-5 zobungcali kunye neeseti ezingaphezu kwama-200 zezixhobo kunye nezixhobo.
Ngo-2012, i-HUADE iyile yaza yavelisa inkqubo yokuhamba koxinzelelo oluphezulu oluzenzekelayo olupheleleyo (ikwabiza nenkqubo yenethiwekhi kunye nesiphekepheke).
Isityalo esitsha sovavanyo lweemitha ezingama-40 ukuphakama senkqubo yokugcina ezenzekelayo iyakhiwa ngonyaka we-2020.
Ngemizamo yenkuthalo yamalungu e-HUADE, utyalomali oluqhubekayo kwi-R & D, kunye nothungelwano olubanzi lokusasazwa kwihlabathi liphela, i-HUADE iguqukile ukusuka kumzi-mveliso wokurhabaxa waba ngumenzi ophambili weenkqubo zokugcina ezizenzekelayo kunye neenkqubo zokurhabaxa. Umthamo wemveliso yonyaka ujikeleze iitoni ezingama-50,000.
Njengesixhobo kunye nomboneleli wenkqubo, i-HUADE ineqela le-R & D elomeleleyo, amaziko okuvelisa aqeqeshiweyo kunye nabasebenzi abanezakhono. Ngamaqabane kwihlabathi liphela, i-HUADE iyaqhubeka nokuhlaziya iimveliso, itekhnoloji kunye neenkonzo ukuhlangabezana neemfuno zabathengi. Zonke iimveliso zenziwe ngokuhambelana nemigangatho yoshishino lwamazwe ngamazwe, oko kukuthi i-Euro norms FEM, i-Australia, i-US imigangatho.
Ukwabelana nabathengi bethu ngobukrelekrele ngakumbi, iindleko ezingabizi kakhulu, izisombululo zokugcina ezikhuselekileyo ngakumbi, kunye nokwenza ixabiso ngakumbi kugcino lwabathengi bethu.
Ukubonelela ngomgangatho ophezulu kwiinkqubo zokugcina ezizenzekelayo kunye neenkqubo zokuqhelanisa eziqhelekileyo kumaqabane ethu kunye nabasasazi.
Imveliso yokuSebenza yeHUADE
Ukugqibelela: siyakwazi ukwenza uluhlu olupheleleyo lweenkqubo zokugcina iirock, iinkqubo zokugcina ezizenzekelayo.
Izinto ezintsha kunye nendalo zingumthombo wokukhula kwe-HUADE. Sisoloko sinika ezona zixhobo zihambele phambili, kunye nezinto zamva nje.
Ngaba isiseko se-HUADE. Iinkqubo zethu zezona zikhuselekileyo kwaye zingcono kumaqabane ethu, abasasazi kunye nabathengi ngenxa yentsimbi ekumgangatho ophezulu, ukubala okuphuculweyo kunye noyilo oluguquguqukayo.